Miyuu Lionel Messi Taam U Ahaa Ciyaartii Xalay Mise Wuu Dhaawac Ciyaarayey? Tababare Valverde Oo Xaqiiqada Ka Sheegay Xaaladda Xiddiga Reer Argentine - Gool24.Net
Miyuu Lionel Messi Taam U Ahaa Ciyaartii Xalay Mise Wuu Dhaawac Ciyaarayey? Tababare Valverde Oo Xaqiiqada Ka Sheegay Xaaladda Xiddiga Reer Argentine
Barcelona ayaa xalay lumisay fursad ay siddeed dhibcood hoggaanka ku qaban lahayd, laakiin barbar-dhac ay la gashay Athletic Bilbao oo ay marti u ahayd, ayaa waxay kusoo koobtay lix dhibcood oo ay ka horreyso Real Madrid oo dhamaadka usbuucii horena guul-darro 1-2 ah ugu soo xambaarisay garoonkooda Camp Nou.
Tababare Ernesto Valverde ayaa shaxdiisa xalay kusoo bilaabay Lionel Messi oo kulankii Arbacadii beddel kusoo galay, waxaase uu samayn waayey dhaqdhaqaaqii mucjisada ahaa ee ugu dambaynta uu isagu guusha u go’aamin jiray naadigiisa, waxaanay taasi keentay su’aal layska weydiiyey inuu si buuxda uga soo kabtay dhaawacii kasoo gaadhay ciyaartii Valencia ee toddobaadkii hore ay barbar-dhac 2-2 ku kala baxeen.
SIDOO KALE AKHRISO: Barcelona Oo Hal Arin Ka Dalbatay Neymar Inuu Sameeyo Ka Dib Markii La Soo Diiday Dalabkoodii Ugu Danbeeyay
Messi oo kulankaas Valencia dhaliyey laba gool xilli lagaga hor maray goolasha, ayaa waxa uu ciyaartii xalay u muuqday mid is ilaalinaya, hase yeeshee tababare ayaa diiday wararka sheegaya in laacibka reer Argentine uu dhaawac ciyaarayey.
Barcelona oo usbuuca dambe ay kusoo fool leeyihiin laba ciyaarood oo ay tahay inay guuleystaan oo horyaalka iyo Champions League ay Lyon iyo Real Valladolid wada ciyaari doonaa, ka hor inta aanay laba kulan oo xidhiidh ah Real Madrid ugu tegin Bernabeu, ayaa waxa uu tababare Valverde sheegay in kabtankiisu uu taam u ahaa ciyaartii xalay.
“Boqolkiiba boqol ayuu ahaa, sidaas ayaanu u ciyaaray. Leo wuu fiican yahay, laakiin hore ayey dhibaato ugu timid balse hadda si buuxda ayuu diyaar u ahaa.” Sidaas ayuu yidhi Valverde.
Ciyaartan waxa dhalleecayn loo soo jeediyey Arturo Vidal iyo Philippe Coutinho oo bandhigoodu liitay, hase yeeshee Valverde ayaa diiday in si gaar ah loo bartilmaameedsado, waxaanu yidhi: “Marka aad barbarrayso adigoo u malaynaya inaad guuleysanayso, taas waxay wada saaran tahay kooxda oo dhan, maaha kaliya hal ama laba ciyaartoy. Ciyaartoy kastaa anaga ayuu naga tirsan yahay, waana qayb kooxda ka mid ah, marka aan isbeddel sameeyana, kaliya hal ciyaartoy dibedda ma dhigayo.”
Barbar-dhacan ayaa Barcelona u ahaa kulankii saddexaad oo xidhiidh ah ee ay guul weyday, waxaanay hore ula soo barbarraysay Valencia oo 2-2 ay kusoo kala baxeen iyo Real Madrid oo Arbacadii 1-2 kaga adkaatay garoonka Camp Nou.
Ciyarta barca laga badiyay idinka meey qaas idin aheed ciyarta barbar dhac ku dhamatay iska saxa 1-1
Waar ma adaa goal ka labaad Real u dhaliyay waar isa soo sax.